Neal Maupay Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
Home Ulo oru Europe Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agụkọ Njikwa Ndụ
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Na-adịghị Agụkọ Njikwa Ndụ. Ebe E Si Nweta Foto: GetfootballNewsFrance na TransferMarket
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye a maara nke ọma dị ka "Neal“. Anyị Neal Maupay Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ebili nke Neal Maupay. Ebe E Si Nweta Foto: OGCNice, GetFootballNewsFrance, SkySports na TheSun
Nchịkọta ahụ metụtara ndụ ya mbụ, nzụlite ezinụlọ, agụmakwụkwọ / ịkọ ọrụ mbụ, ndụ ọrụ ya mbụ, ụzọ ama ama, ebilite akụkọ ama ama, mmekọrịta mmekọrịta, ndụ nke onwe ya, akụkọ ezinaụlọ ya, ụdị ndụ ya na akụkọ ndị ọzọ na - amaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara na o nwere anya nke ọma maka ịchọrọ ihe mgbaru ọsọ ma o dokwara anya na ọ bụ otu n'ime ndị isi na-esote French Football. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle ụdị nke Neal Maupay's Biography nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Nzụlite ezinụlọ na Ndụ mbu
Neal Maupay mụrụ na ụbọchị nke 14 nke August 1996 nye nne Argentine na nna onye France na ngalaba Yvelines nke dị na mpụga Paris, France.
Maupay sitere na ezinụlọ ya site na obodo mara mma nke Versailles nke bụ ihe dịka 17.1 km site na etiti obodo Paris. Laa azụ n'oge ahụ, ezinụlọ ya biri na Versailles- otu n'ime ala ndị kachasị baa uru na mpụga Paris. Versailles bụ obodo amara maka ubi ya nke UNESCOpụtara dị ka Ebe Nleba Worldwa. N'okpuru ebe a bụ nlele mara mma nke obodo Neal Maupay nwere mmalite dị ala.
Neal Maupay Early Life- O nọrọ afọ 4 mbụ n'obodo ọmụmụ ya, Versailles ebe ezin’ụlọ ya siri. Ebe E Si Nweta: GardenVisit na frenchmoments
N'agbanyeghị na a mụrụ ya na France, Neal Maupay nwekwara mgbọrọgwụ ezinụlọ nke Argentina n'ihi mama ya bụ onye kwagara France ebe ọ ghọrọ nwunye nna Neal Maupay. Mgbe nne Maupay na-elekọta ụlọ, nna ya nwere nkwa ya na ọrụ ndị nkịtị nke rụrụ ọrụ na-apụtaghị ìhè na mmalite Neal Maupay na nwata na ịgba bọl.
Mbugharị ndị nkịtị bụ ihe nkịtị ka ndị nkịtị. N'afọ 2001, ozi bịara nna ya na e si na Versailles zigara ya n'otu ngalaba ọrụ ya na Côte d'Azur, mpaghara nchịkwa dị na Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ France.
Emere mkpebi ahụ maka ezinụlọ Maupay ịkwaga na ezigbo okwukwe na obere Neal (agadi 5) n'akụkụ nne na nna ya kwagharịrị site na ịgafe 880.0 km gaa Côte d'Azur. Ọ bụ na Côte d'Azur ka nwatakiri ahụ lebara anya nrọ nrọ ya.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Nkụzi na ịrụ ọrụ
Na afọ 6 na 2002, nwata nwoke ahụ hụtara ihunanya ya nke “…Footballgba bọl“. Oge mbụ Neal nwere mmasị n'egwuregwu bọọlụ hụrụ ndị mụrụ ya debara aha ya na obere klọb aha ya bụ Valbonne Sophia-Antipolis. Ọ malitere ihe dị mkpa iji nweta agụmakwụkwọ football ebe ahụ ka ọ jisiri ike were ya na ọmụmụ. N'ihi nsogbu ụlọ akwụkwọ n'oge ahụ, Maupay nwere ike iso ndị enyi kpọọ egwuregwu ahụ na ngwụsị izu.
N'agbanyeghị ịbụ ntọala dị obere nke football, Valbonne Sophia-Antipolis nwere ezigbo ụlọ ọrụ rere agba nke nwere nnukwu aha na bọọlụ French. Obere klọb a nwetara aha na iweta ụmụ akwụkwọ ha kachasị mma ka ha nwee ọnwụnwa na OGC Nice, bụ ezigbo ndị agbata obi ha. N'ihi na Neal Maupay Ihe nke Valbonne Nwa akwukwo kachasị mma, OGC Nice dọtara mmasị ya. Klọb ahụ mere ihe niile dị mkpa iji mee ka ọ banye na ngalaba agụmakwụkwọ ha.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Ndụ Ndụ Mmalite
N'afọ 2007, ikike Neal Maupay hụrụ OGC Nice management na-ewere mgbakwunye ahụ. Ndị klọb bọọlụ gara n'ụlọ ezinụlọ Maupay iji mee ka ndị mụrụ ya kwe ka nwa ha nwoke sonyere ha. Nna Neal Maupay na mama ya ji ọ acceptedụ nabata na nwa ha nwoke na-eto eto tụgharịrị na Nice, oge egwuregwu 30 si klọb mbụ ya.
Na Nice, Maupay malitere igwuri egwu n'ihu n'ihi ụbụrụ bọọlụ ya tozuru etozu. N'agbanyeghị na ọ bụghị onye kachasị ukwuu ma ọ bụ onye kachasị ike, ọ nwetara aha nke itinye onwe ya n'ọnọdụ kwesịrị ekwesị na oge kwesịrị ekwesị.
Maka ndị dike, Maupay ji arụsị Luis Suarez onye dị ka n'oge ahụ bụ onye nkwenkwe ụgha ya na Ajax. Ọ ickedomiri ụdị egwuregwu ya na ama egwuregwu, ihe egwu mere ka ọ pụọ iche na ndị otu egwuregwu ya. Ọ bụ n'oge a ka ọ mere Neal obi ụtọ na ọ ga-abụ onye na-eme egwuregwu na-aga nke ọma.
Neal Maupay nwere ezigbo ahụ iru ala maka OGC Nice. Ebe E Si Nweta Foto: NiceMatin
Neal Maupay toro site na mmali na oke n'ime afọ 5 ya na ụlọ akwụkwọ ntorobịa OGC Nice. Ozugbo ọ tụgharịrị 16, ọ gbaara ọsọ ọsọ iji nweta mbinye aka ya n'òtù egwuregwu mbụ ha. Nwata nwanyị Maupay banye na ndị otu egwuregwu nke Nice bụ ihe nsọpụrụ ịhụ ka ọ na-ahụ ka ọ na-etinye ihe ịga nke ọma nke ịbụ onye egwu kachasị ntakịrị nke nọ n’otu ndị otu egwuregwu OGC Nice 1st.
Naanị mgbe ọkpụkpọ oku ya gasịrị, Maupay dị afọ 16 mere ihe ọzọ na - enweghị oge. Ọ ghọrọ 2nd kacha okenye nke gbagoro agbachitere na Ligue 1.
Neal Maupay nwere ezigbo ihe ịga nke ọma n'ime nnukwu ndị otu Nice. Ebe E Si Nweta: FranceFootball
Dị ka ihe niile siri dị ka o si masị ya, obere kpakpando ndị France na-ebili maara nke ahụ ụbọchị ọjọọ n’ezie abia na ubochi ya na OGC Nice guru ha.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Ụzọ Ebube
Logha A Na-atụghị Anya Ya: Na mbido, ihe niile malitere ịga nke ọma na Neal Maupay mgbe ọ gbasasịrị banye n'òtù ndị otu egwuregwu nke mbụ. Ihe gara nke ọma ruo mgbe mmerụ ahụ siri ike wepụrụ ya pụọ ​​na mmụọ ịgba egwu ọ hụrụ n'anya.
Nauputa site na mmerụ ahụ, Maupay zutere àgwà dị iche na nna ya ukwu Claude Puel. Idem ama enyek enye ndikụt nte ke owo emi ọkọtde enye urua ke urua emi ẹkebede.
Neal Maupay meriri na mberede n'okpuru Claude Puel. Ebe E Si Nweta Foto: Ligue1
Ihe Claude Puel malitere ịmalite emetụta ọrụ ya, mechaa gbanwee echiche ya banyere ọdịnihu ya na klọb. Ihe “Nwa Nice”Dị ka a na-akpọkarị ya inwe ndidi mgbe ọ hapụsịrị ya mmụọ. O mere oke mkpebi ịhapụ OGC Nice na August 2015.
Na 10 August 2015, Maupay nwetara onwe ya na Saint-Étienne. Naanị izu ole na ole ọ batachara, ọ malitere inwe nnukwu mmetụta na klọb ahụ. Ọrụ ọ rụrụ na Saint-Étienne pụtara na o mere mkpebi ziri ezi ịhapụ OGC Nice. Ị maara?… Neal Maupay nwere ihe mgbaru ọsọ na Saint-Étienne nwere wee hụ ka ndị France U19 na-akpọ ya.
N'agbanyeghị na ọ malitere na Saint-Etienne, Neal Maupay ka nwere mkpa ọ dị igwu egwu na England. Ebe E Si Nweta: Instagram
Mee ka atụmatụ Bekee rụọ ọrụ: N'ịbụ ndị ndị otu French U19 na-ahụ anya hụrụ ka Maupay nwere nnukwu agụụ na-agụ agụụ ịrịgo n'ọgba egwuregwu. N'oge a, ọ malitere ịkọwapụta ọdịnihu ya. Oge egbughi oge tupu nwa ahụ amalite inwe mmasị na football French. Na mbu, o zuputara ochicho nke igwu egwu na Premier League.
Maupay chepụtara atụmatụ ọ ga-ahụ ka ọ na-aga ịnwale nkewa Bekee dị ala. Ọ tụkwasịrị obi na ike ya iji ụdị English Ligue 2 dị otú ahụ wee nweta mmụba na League1, asọmpi na mgbe ahụ, Premier League. Nke mbu, Neal Mapuay kwenyere inwale ikike ya site na isonyere English Ligue 2 club Brest na mbinye ego.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Bilie na-ewu ewu
Ọ dịrịghị Neal Maupay mfe ịnabata England na-amụtaghị asụsụ Bekee. N'ikwu banyere ahụmịhe ahụ siri ike, o kwuru otu oge;
“Abụ m nwata, ọ bụkwa nke mbụ m na-ahapụ obodo m. Amaghị m otú e si asụ Bekee. Amaghị m onye ọ bụla na klọb ahụ.
Amaghị m ihe ọ bụla gbasara footballngland Bekee, ma ọ bụ banyere England. Agaghị m London. Ọ dịrịghị m mfe ikpebi na ahụ́ iru ala Mgbe i nwere ọdịbendị ọhụrụ. ”
N'agbanyeghị mgbochi asụsụ, Maupay rụrụ ọrụ dị ukwuu. Ọ gara n’ihu iji merie August 2016 UNFP Ligue 2 Player nke ọnwa. Ọ nwetakwara aha ndị ọzọ dịka Septemba, Ọkịba na Disemba 2016 onye ọkpụkpọ nke onyinye ọnwa. Mgbe ọ rụzuru ihe ndị a, Neal kpebiri itinye ihe ọ bụla n'ihe ize ndụ site na isonye na klọb Championship Brentford bụ onye bịanyere aka na ya na-adịgide adịgide.
Maupay nwere ezigbo mmalite na Brentford ka ọ ghọrọ igwe mgbaru ọsọ kachasị ọnụ ha ozugbo. Ọrụ ọ rụrụ na oge 2018 / 2019 hụrụ ya ka ọ na-enweta nkwanye ugwu dị iche iche ndị a bụ; (1) 2018 August PFA Fans 'Egwuregwu Plọte Pọọsis nke ọnwa, (2) Egwuregwu 2018 Septemba nke Ekeresimesi egwuregwu nke ọnwa, (3) Onye na-akwado ndị egwuregwu 2018 / 2019 Brentford nke Afọ na (4) 2018 / 2019 Brentford Player nke Year award.
Neal Maupay na English Junior League mechara kwụghachi ụgwọ. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Maupay kwupụtara ọkwa nzụkọ ozi ala bekee ya n'asụsụ Bekee site na inweta ihe nrịba ama kachasị. Ị maara?… Maupay meriri na London Football Awards (2018 / 2019 EFL Player nke Afọ), na-eme ka ọnọdụ ya dị ka nnukwu onye ọkpụkpọ ọzọ na-esote na French football. Dịka ọtụtụ ndị egwu ga-atụ anya, inweta ọkpụkpọ 2018 / 2019 EFL nke nturu nturu afọ mere ka ọ rịgoro ọsọ ọsọ na Premier League.
Neal Maupay Bilie na Akụkọ Ama- O nwere ọpụpụ ọpụpụ site na EFL. Ebe E Si Nweta Foto: Twitter
Kpamkpam na 5 nke August 2019, Maupay kwagara na Premier League na Brighton & Hove Albion. N'oge a na-ede akwụkwọ, onye egwuregwu bọọlụ French na-ebi ezigbo ndụ ma hụ ka nrọ ya kachasị ọhụrụ na-emezu. O tinye aka n'ọtụtụ oge mmeri egwuregwu maka Brighton kachasị mkpa, na-eme ka ọnọdụ ya nọrọ na ndị otu klọb.
Neal Maupay- Nwee ezigbo ndụ ya na Brighton. Ebe E Si Nweta Foto: BBCFootball
Obi abụọ adịghị ya, anyị ndị na-akwado bọl nwere ike ịnọ na njedebe nke ịhụ nwatakịrị nwanyị ọzọ na-eto eto French ka ọ na-agba ọsọ na njikwa klaasị nke ụwa n'ihu anyị anya. Ndị ọzọ, dịka ha na-ekwu, bụ akụkọ ugbu a.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Ndụ mmekọrịta
Site na nkwalite ya na ugwu na ịrịgo elu elu nke Bekee, ọ bụ ụfọdụ ndị egwuregwu bọọlụ ga-echeworị echiche ịmara banyere Maupay, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na o nwere enyi nwanyị ma ọ bụ nwunye. Enweghị agọnarị eziokwu ahụ bụ na ọmarịcha anya ya na ụdị egwuregwu ya agaghị etinye ya dị ka onye nke mbụ na ndepụta nke enyi nwanyị.
Ọnye na-bụ Neal Maupays Girlfriend? Ebe E Si Nweta Foto: Twitter. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram
Mgbe ọtụtụ nnyocha gasịrị na ịntanetị, Ọ na-apụta n'oge edere, Neal Maupay etinyewo mgbalị siri ike ịhapụ ikpughe enyi ya nwanyị ma ọ bụ nwunye (nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ọ lụọla nwaanyị). Ikekwe ọ nwere ike ịbụ Neal na-alụbeghị di na WAG.
Imirikiti ndị egwuregwu bọọlụ na-ahọrọ ichebe enyi nwanyị ha site na mgbasa ozi n'ihi eziokwu ahụ na a gaghị agbaghara bọọlụ Bekee ọkachasị mgbe a na-ejighị ọrụ na mmekọrịta dị mma. Nke a nwere ike ịbụ ikpe maka Neal Maupay.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Ndụ nke Onye
Tomata Ndụ Onwe Onye nke Neal Maupay ga - enyere aka nweta nkọwa zuru oke banyere ụdị onye ọ bụ n'ọdụ egwuregwu. Na-amalite, ọ bụ onye na-enweghị atụ, onye gosipụtarala na ọ nwere ike imeghari ọdịbendị Bekee. Maupay bụ onye na-eche mgbe ụfọdụ mkpa ọ nọ naanị ya wee gbanahụ ihe niile iji weghachi ike mgbe ọ na-atụgharị uche maka ọdịnihu ya.
Neal Maupay Ezigbo Ndụ Eziokwu. Ebe e si nweta ya DailyMail
Ọ bụ nwa amadị dị jụụ nke nwere mmasị igosipụta ịdị umeala n'obi na-enweghị egbugbu ọ bụla n’etiti aha ndị football nke oge a. Maupay nwere omume enyi ma na-eme ya BỤGHỊ nwere agwa nwoke alfa. Ọ bụghị brash, nwere obi ike ma nwee obi ike. Maupay na-akwado oke bekee ịmụ asụsụ bekee, ihe nlere anya hụburu ya ji ọ takingụ were Laptọọpụ MacBook Pro Apple ka ọrụ aka ọrụ.
Tomata Neal Maupay Personal Life na egwu. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram na Twitter
Nke ọzọ na ndụ ya, Maupay nwere onye nwere mmụọ siri ike, onye ga-ekpebi ime ihe ọ ga-aga imezu ya. Iji maa atụ, otu mgbe o kpebiri mkpebi ịmanye onwe ya ibili site na ndị bekee nke ala bekee na Premier League n'agbanyeghị ihe mgbochi asụsụ na ọdịnala.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - si ebi ndụ
Nnukwu ụgwọ ndị mmadụ ji ebi ndụ na-agba agba na-enwekarị ọ withụ na ndụ okomoko ebe a na-ahụkarị nnukwu ụlọ, ụgbọ ala okomoko, na akara ndị ọzọ bara ụba. Nnukwu Neal Maupay anyị bụ ọgwụ na-enye ume ọhụrụ nye ụdị ndụ obibi. Anyị nwere ihe akaebe banyere ụzọ ndụ ya dị mfe. Ugbu a, ebe ndị egwuregwu bọọlụ ndị ọzọ na - akwọ ụgbọala dị oke ọnụ na ọzụzụ, a na - ahụkarị Maupay na ụdị ụgbọ ala ya. Vespa Scooter.
Mata Ndụ Neal Maupay. Ebe E Si Nweta Foto: Onwe Na Twitter
Neal Maupay na-etinye ego site na ụgwọ ọrụ ya kwa izu n'ọrụ bara uru. N'oge ezumike, nwoke France ahụ dị ka a hụrụ n'elu na-ahọrọ ileta ndị mara mma ebe ndi mmadu no. N'ozuzu, akparamàgwà ya na mkpebi ndị dị n'èzí bụ ezigbo ngosipụta nke ndu adighi ala.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Ndụ Ezinụlọ
N'oge edere, ozi banyere ndị otu ezi-na ụlọ Neal Maupay edeghị nke ukwuu. Ma, otu ihe doro anya. Nwa nwoke France nwere ezinụlọ ezinụlọ Argentine enweela ihe ịga nke ọma ejiriwo akụkụ nke ezinụlọ ya meghee maka nnwere onwe ego niile na-ekele mkpebi o mere iji bụrụ onye egwuregwu.
Neal Maupay nọkwa n'oge ederede echebela mama ya, nna ya, nwanne ya nwoke na mgbasa ozi site na mgbasa ozi French na Bekee. O nwere ike bụrụ na ha na-ebi ezigbo ndụ na Frans, ha na-abịakwa ileta ya mgbe ụfọdụ na England. Anyị ji n'aka na ọ ga-eme ka nnọkọ mgbasa ozi nke Britain nwee nnọkọ ezinụlọ kwesịrị ekwesị. Ihe Neal Maupay na-elekwasị anya ugbu a bụ ezi FOOTBALL.
Neal Maupay Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banyere Ihe Ndị A Kọrọ Banyere Ha - Eziokwu efu
Akụkụ Ya nke Ya: Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ghara ịdị ogologo na nnukwu MA Maupay agaghị eche ịlụ ọgụ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ọ kachasị megide ndị na-eto eto na-agbachitere dị ka Brandon Williams Onye guzoro n’uzọ ya.
Brandon Williams na Neal Maupay- Ndị egwuregwu abụọ na - enweghị isi. Ebe E Si Nweta Foto: DailyMail
Ya 3 Idol: Maupay bụ ụdị ọkpụkpọ na-amasị ọ bụghị naanị Luis Suarez. Nwoke French ahụ tinyekwara uche ya na akụkọ egwuregwu bọọlụ abụọ bụ; Sergio Aguero, na Zidine Zidane. Se
“Ana m agbalị ime mmụọ ha niile. Aguero na Suarez bụ ndị egwuregwu siri ike n'agbanyeghị nha ha. Ha abụghị ndị kachasị ma ọ bụ nke kachasị ike, mana ha anaghị ahapụ ihe ọ bụla n'elu ala. ha nọ n'ọnọdụ ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị.
Ejikwala m ilekọta bọl dị ka Zidane. Ọ masịrị m igwu egwu obosara ma obu dika nọmba 10, mana ọnọdụ m ka masịrị m bụ iti ”.
Religion: Maupay bụ ụdị onye egwuregwu bọọlụ a hụrụla ọtụtụ mgbe na-egosi mkpịsị aka ya n’eluigwe iji kelee Chukwu mgbe o zesịrị ihe mgbaru ọsọ. Dika edeputara n’okpuru, o nweghi nsogbu obula n’igosiputa nkwenkwe okpukpe ya nke ndi Kristi.
Neal Maupay rụgidere mkpịsị aka ya na mbara igwe mgbe akara ya gachara- Ihe ịrịba ama nke nkwenkwe okpukpe. Ebe E Si Nweta: Premier League, brightonandhoveindependent
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Neal Maupay Akụkọ banyere nwata, gbakwunyere ihe ndị ọzọ gbasara akụkọ ndụ ha. Na LifeBogger, anyị na-agba mbọ maka izi ezi na izi ezi. Ọ bụrụ n’ịchọta ihe adịghị mma, biko kesaa ya nye anyị site na ịza ajụjụ n’okpuru. Anyị ga-eji echiche gị niile kwanyere ma kwanyere ùgwù ùgwù.
Issa Diop Childhood Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
Ulo oru Europe351